အတိတ်ကအရိပ် (သို့) “လူလည်းတထွေ ရေလည်းတခြား” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Arts & Humanities » အတိတ်ကအရိပ် (သို့) “လူလည်းတထွေ ရေလည်းတခြား”	18
အတိတ်ကအရိပ် (သို့) “လူလည်းတထွေ ရေလည်းတခြား”
Posted by ဦးကျောက်ခဲ on Nov 19, 2015 in Arts & Humanities, Creative Writing, Drama, Essays.., Literature/Books | 18 comments
မပြုံး ကျောက်စ်ရဲ့ဝေဒနာဟောင်းကို တူးလေပြီ…
ပြန်သတိမရချင်တဲ့ ဘဝတကွေ့မှာ ကျောက်စ် အိပ်စရာအိမ်ယာမဲ့ဖူးတယ်ခင်ဗျ ။ ဟိုသည်ကြုံရာအိပ်ရင်း နောက်ဆုံးတော့ အဲသည့်ခေတ်က နာမည်ကြီး ဗွီဒီယိုတိပ်ခွေအငှါးဆိုင်တစ်ဆိုင်ရဲ့ အခွေကူးခန်းမှာ ညဘက်ဆိုအခွေပွါးရင်း မှိန်းရတာပေါ့ဗျာ ။ ကြုံလို့ပြောရရင် အဲသည့်အချိန်တုန်းက အခွေဖြန့်သူတွေထဲမှာ အခု အနဂ္ဂတို့အဖေ အဆိုတော်ကြီး (ဦး)မင်းမင်းလတ် ဆီကအခွေတွေက ကွာလတီလည်းအလွန်ကောင်းပြီး အောက်မှာ အင်္ဂလိပ်စာတန်းထိုးလည်းပါပါတယ် ။ နောက်ပြီး ဇာတ်လမ်းကောင်းတာတွေလည်းများတာမို့ အင်္ဂလိပ်စာဝေါဟာရနဲ့ လေယူလေသိမ်းအတုခိုးရအောင် သူ့ဆီက ဗွီဒီယိုတွေဆို ခွေကူးနေရင် မအိပ်ပဲထိုင်ကြည့်တာပါပဲ… ။
တနေ့သား … ညဘက်… နှင်းဆီကုန်းဘိုးဘွားရိပ်သာမျက်စောင်းထိုးက သူတို့အိမ်မှာအခွေသွားယူတော့ ၊ အခွေတွေလည်းထုတ်ပေးရင်း ထိုးမုန့်လည်းကျွေးရင်းက “ကောင်လေးရေ Sally Field (Forrest Gump မှာလည်း သူပါပဲ) ရဲ့ ဒီကားလေးက အလွန်ကောင်းတယ်ကွ ၊ မင်းအခွေပွါးရင်း ကြည့်ပေါ့” လို့ တိုက်တွန်းပါတယ် ။ ဟုတ်ကဲ့… အဲသည့်လို ဇာတ်ကားကောင်းတွေညွှန်းရင် ကျောက်စ် မလွတ်တမ်းကြည့်ပါတယ်… နို့မို့ ကြက်အိပ်ကြက်နိုးကြည့်ရရင် ဖီလင်မလာဘူးခင်ဗျ ။
အဲသည့်မှာ “Not Without My Daughter” နဲ့ ကျောက်စ် တွေ့ကြတော့တာပါပဲ ။ Sally Field ကလည်း သရုပ်ဆောင်ကောင်း ၊ ဇာတ်လမ်းကလည်း တကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန် သည်းထိတ်ရင်ဖို ၊ ကိုယ်ကလည်းဒီလောက်စိတ်မခိုင် ၊ ဗွီဒီယိုအခွေကူးနေတာမို့ စက်ကိုရပ်မရ ကျော်မရ ၊ အတော်ရင်မောစွာနဲ့ကြည့်ခဲ့ရတာ ၅-ကြိမ်ပါ ။ ကံများဆုံချင်သေးတော့ စလုံးကိုရောက်စ ၁၉၉၆ မှာ ဒီစာအုပ်ကောင်းတယ် ဖတ်ကြည့်ဆိုပြီး နောင်တော်စီနီယာတစ်ယောက် ငှါးလိုက်တာ မူရင်းစာရေးသူ “Betty Mahmoody” ရဲ့ “Not Without My Daughter” ဖြစ်နေတယ် ခင်ဗျ… ။
ပြောရရင် ဟိုးအချိန်တွေတုန်းက တချို့ ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေကို နားမလည်ဘူး … အော်ရီဂျင်နယ် ဝထ္ထုမှာရော ၊ ဓာတ်ရှင်မှာရောခင်ဗျ … ။ အထူးသဖြင့် ရှီးယားမွတ်စလင်တွေ အယူသည်းလွန်းတာရယ် တချို့ဝေါဟာရတွေရယ်ကိုပါ ။ အဲဒါနဲ့ ကျောက်စ်သူငယ်ချင်း ဆွန်နီမွတ်ဆလင်ကိုမေးပြန်တော့ သူကလည်းမရှင်းတတ် ၊ ရှီးယားတွေက တမန်တော်မှာခဲ့တဲ့အတိုင်း ကျင့်ကြံတာမဟုတ်ဆိုတာပဲ ပြောနိုင်ပါတယ် ။ ဝထ္ထုကို ပိုကဲလွန်းတယ် ထင်ထားတာ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ Middle-East (Bahrain) မှာ အလုပ်တာဝန်နဲ့ ၃-နှစ်လောက်နေလိုက်မိမှ သူတို့ရဲ့ဓလေ့စရိုက်နဲ့ မဟာဖိုဝါဒအားကြီးလွန်းတာ မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ဖြစ်သွားပါလေရော ။ အပိုအမြတ်ထွက်တာက ဝထ္ထုထဲကစာသားတွေကို နားလည်သွားတာပါပဲ ။
အခုလည်း မွပြုံးက သူ့ရဲ့ နောက်ဆုံးထုတ်ဝထ္ထုကို ရွာအပြန်လက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါတယ် “လူလည်းတထွေ ရေလည်းတခြား” တဲ့ … ။ ဖတ်မယ်လို့ အဖုံးကို ကြည့်လိုက်တော့… လား … လား… ကြုံရပလေတယ် “Betty Mahmoody” ရဲ့ “Not Without My Daughter” ကို ဘာသာပြန်ထားတာဖြစ်နေတယ်… တိုက်ဆိုင်လေစွ ။ နိုင်ငံရေးမုန်တိုင်းအောက်မှာ ဓလေ့မတူ စရိုက်မတူ ဘာသာမတူတဲ့ အိမ်ထောင်သည်နှစ်ဦးရဲ့ သမီးငယ်ကို လွန်ဆွဲကြတဲ့ ဇာတ်လမ်းကောင်းပါ ။ မဟာဖိုဝါဒကို ထိပ်တန်းတင်တဲ့ အီရန်အမျိုးသားနဲ့ သူ့အသိုင်းအဝိုင်းကြားမှာ အချစ်ကို ယုံမှတ်လို့ ပုံအပ်ခဲ့တဲ့ အမေရိကန်အမျိုးသမီးရဲ့ ဘဝဖြစ်ရပ်မှန်ဆိုလည်း မမှားပါဘူး… ။
မွပြုံးရေ ကျေးဇူးလည်းအရမ်းတင် … အကြိမ်ကြိမ်ဖတ်ဖူး ကြည့်ဖူးသူတောင် ပထမတစ်ခန်းမှာတင် မျက်စေ့ထဲကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်ပြီး ရင်မောလာရပါတယ် … ။ ဒီနေရာမှာ ဆရာမဝင့်ပြုံးမြင့်ရဲ့ ဘာသာပြန်အတတ်ပညာကို မလေးစားပဲ မနေနိုင်ပါဘူး ။ အင်္ဂလိပ်စာ တတ်သူတိုင်း ဘာသာပြန်စာမချောတာ ဝေါဟာရမကြွယ်တာ သတိထားမိကြမှာပါ ။ မပြုံးဘာသာပြန်သွားတာ ပညာပါလွန်းတော့ ဦးကျောက်ခဲလည်း ဝထ္ထုနဲ့စီးမျောလို့ အီရန်ကိုရောက်သွားပြီး သဲထိတ်ရင်ဖို ဝေဒနာဟောင်းကို ပြန်ခံစားလိုက်ရကြောင်းပါ… ။
ဆရာဦးဝင်းတင်ရဲ့ ဝထ္ထုအမှာစာက ပြည့်စုံတာမို့ ဦးကျောက်ခဲ ဝင်ပြီးဆားမခတ်တောပါဘူး…. ။ မိတ်ဆွေများကို တိုက်တွန်းချင်တာက ဆရာမ ဝင့်ပြုံးမြင့်ရဲ့ “လူလည်းတထွေ ရေလည်းတခြား” ကို ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ကြည့်ကြပါလို့…
Kaung Kin Pyar says: အမျိုးသမီးရဲ့ မဆုတ်မနစ်လွတ်မြောက်ဖို့ ကြိုးစားတာကို အသိအမှတ်ပြုရတယ်…။ အယ်လင်လို လဲကျရာမှာ ထိုင်မချခဲ့လို့သာ လွတ်သွားခဲ့တာပဲ..။ အရေးအသားကတော့ ဦးကျောက်ပြောသလိုပဲ… ၀တ္ထုအစကနေ အဆုံးထိ ဖတ်ချင်လောက်အောင် ဆွဲခေါ်နိုင်ပါတယ်…ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ပဲ..။
အရသာပျက်သွားမှာစိုးလို့ နောက်ဆုံးကို ကျော်မဖတ်မိအောင် မနည်းစိတ်တင်းထားရတယ်.. မာထော့ဘ်မှ မပါရင် မသွားဘူးဆိုတဲ့ သားနှစ်ယောက်ရှိပြီးသား အမေရိကန်မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့ သားသမီးအပေါ်ထားတဲ့စိတ်ရော၊ အမေရိကန်က အမေနဲ့ ကင်ဆာဖြစ်နေတဲ့ အဖေကပါ သမီးပြန်လာနိုင်အောင် ကူညီအားပေးခဲ့တာရော.. သဘောကျတယ်..
သူတို့ ဓလေ့စရိုက်နဲ့ အစွန်းရောက်နေတဲ့ မဟာဖိုဝါဒီသဘောကို စေ့စေ့ငှငှ မြင်လိုက်ရတယ်…။
ဖတ်သင့်ဖတ်ထိုက်တဲ့စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ဖြစ်ကြောင်း ထပ်ဆင့်ထောက်ခံပါတယ်..ရှင့်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2898
ဦးကျောက်ခဲ says: ဓာတ်ရှင်မှာတော့…
“နင့်သမီးဒီမှာဆက်နေရင် ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ … ဝမ်းကွဲတွေနဲ့ အိမ်ထောင်ချပေးခံရလိမ့်မယ်” လို့ ကုန်စုံဆိုင်ရှင်က ပြောတဲ့အခန်းပါတယ်…
ဝီကီမှာ ဖတ်ကြည့်တော့ Sayed Bozorg Mahmoody က အသက် ၇၀ အရွယ် ၂၀၀၉ မှာ ဆုံးသွားပြီ ။ သူကလည်း ခေသူမဟုတ် “Without My Daughter” ဆိုပြီး Documentary တွေဘာတွေတောင် ပြန်ပြီး Counter လုပ်သွားသေးသတဲ့…
ရှာကြည့်ဦးမှ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14462
kai says: ကျုပ်ဆီတော့ မရောက်သေး…
အမှတ်မမှားရင်.. တထောင့်တညပုံပြင်တွေက.. ပါရှန်း(အီရန်) ရဲ့ရှေးပုံပြင်တွေ…။ မဟာဖိုဝါဒကဲကဲတွေ…။
သူတို့ယဉ်ကျေးမှုက.. နှစ်၃၀၀၀ကျော်တွေ…။ ဆွန်ပလွန်ချို… ကဗျာ.. ၀ိုင်.. မိန်းမလှတွေ…။
ဒီကိစ္စသေသေချာချာသိရင်… အခု အိုင်စစ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြီးဖြစ်တဲ့…
ဆွန်နီမွတ်စလင်တွေဖြစ်တဲ့.. ဆော်ဒီအာရေဗျထဲက.. တမန်တော်မိုဟာမက်ဇာတိနယ်မြေတွေ…သိမ်းယူလိုရင်း ပဋိဥာဉ်တွေ…။
အဲဒီကနေ.. ကမ္ဘာ့ပဋိပက္ခတွေ…. ရေးရေးတော့ သဘောပေါက်နိုင်တယ်…။
သိချင်သား.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: အတင်းအဖျင်း သတင်းစာထဲက သတင်း တစ်ပုဒ် ဖတ်ပြီး ဒီ လူ့နှယ်လို့ အတွေးပေါက် ပြုံး နေတာက နေ
ရွာထဲ ဝင်တော့ ပြုံးစာ ကို ကျောက်စ် ညွန်း ထားတာ နဲ့ တွေ့လိုက်တော့
ဝါးလုံးကွဲဘဲ ရီ လိုက်တော့တယ်။
ဦးမဆောင်နိုင်လို့ ဦးဆောင်ပေးတာကိုတောင် စော်ကားသတဲ့။ Husband divorces his wife while on honeymoon in Saudi Arabia after he was unable to consummate their marriage… and was shocked by her ‘audacious’ method of arousing him
Kuwaiti man divorces his Saudi wife one day into their marriage
He had been unable to ‘fulfil his duties’, so she decided to help him
The next day, he announced he’s divorcing her for being ‘bold and rude’
Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-3325195/Husband-divorces-wife-honeymoon-Saudi-Arabia-unable-consummate-marriage-shocked-audacious-method-arousing-him.html#ixzz3ryO0ZBTm
ဦးကျောက်ခဲ says: ပြောမယုံ ကြုံဖူးမှသိ… အဲ အဲ မျက်မြင်မှသိ…
အဲ့ အာရပ်မတွေကလည်း တကယ့်မလွယ်ကြောဂျီးဒွေ…
ဟီ ဟိ… ပြန်မမေးနဲ့နော် အရီး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2898
ဦးကျောက်ခဲ says: ပါရှန်းတွေရဲ့ အီရန်က ရှီးယားမွတ်စလင်ခေါင်ချုပ်ပါ…
ဒေသထဲက ဆွန်နီအစိုးရတွေနဲ့ မတည့်သလို သူ့ကိုလည်းဖြုံကြတယ်…
ဆွန်နီနဲ့ ရှီးယားက ကမ္ဘာ့ရန် ၊ ဆွန်နီတွေက ရှီးယားအိမ်မှာ ညအိပ်လို့မရဘူး…
အီရန်ကိုအကြောင်းပြုပြီး ယူအက်စ်က ဘာရိန်းမှာ Fifth Fleet ကို ထားတာလေ…
အိုင်စစ်ဆိုလို့ နိုင်ငံခြားမှာနေတဲ့ ပညာတတ် မွတ်စလင်သူငယ်ချင်းက…
“အိုင်စစ်ဆိုတာ CIA က မွေးထားတာ” ဆိုပဲ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14462
kai says: အမှတ်မမှားရင်… အိုင်းစစ်ရဲ့ရေနံတွေကို အ၀ယ်ဆုံးက.. အစ္စရေး..
လက်နက်ရောင်းတာက.. ယူအက်စ်…။ တခါတလေများ.. ဆီးရီးယားသူပုန်တွေဆီလေယဉ်ပေါ်က…ချပေးတဲ့လက်နက်ကြီးတွေများ.. မျက်စိလည်ပြီးအိုင်စစ်တွေဆီကျလို့.. ရဖူးရဲ့..။
အဲဒီ… ရှီးယားကိုငွေထောက်တာက.. အီရန်..။
ဂျပန်က.. အိုင်စစ်တွေကို.. တိုယိုတာတွေထိုးရောင်းလို့.. ဟမ်းမားတွေရောင်းအားကျသမို့.. ယူအက်စ်လည်းဒေါကန်..။
စိန့်ပြည်ကလည်း.. ရေနံဈေးပေါပေါနဲ့ရ…။ လက်နက်တွေထိုးရောင်းနဲ့ ဟုတ်နေတာကနေ… ရုရှားဝင်လာလို့ဒေါကန်..။
ဥရောပကလည်း.. စစ်ရှောင်တွေ .. ဈေးပေါလုပ်အားတွေ.. အသာကဲ့ယူနေတာကနေ.. လူပါလာသတ်သမို့..ဒေါကန်..။
သိပ်တော့လည်းမထူးပါဘူး..။ မြန်မာပြည်တွင်းစစ်တွေနဲ့..သဘောဆင်ဆင်..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2898
ဦးကျောက်ခဲ says: ဟုတ်တယ်သဂျီး…
ကမ္ဘာတဝှမ်း ဝုန်းဒိုင်းကျဲတဲ့ အိုင်းစစ်…
အစ္စလာမ်ရဲ့ မဟာရန်သူတော် အစ္စရေးကိုတော့ မထိဘူးတဲ့…
မွတ်စလင်စစ်သွေးကြွတွေကို သတ်ကွင်းထဲခေါ်တာဆိုပဲ… Was this answer helpful?LikeDislike 1374
၀င့်ပြုံးမြင့် says: . စာအုပ်ကို အကောင်းဆုံးကြော်ငြာပေးလိုက်သလိုပါပဲ ကျောက်စ်ရေ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
. စာအုပ်က အပေါ်ယံဇာတ်သွက်သွက်ပေမယ့် အာဏာရှင်စနစ် ဖြစ်တည်မှုရဲ့ အရင်းအမြစ်ကို မြင်လိုက်ရသလိုပါပဲ။ သဂျီးပြောတဲ့အတိုင်း အာဏာရှင်စနစ်ဆိုတာ အစွန်းထွက်လေးသာ ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရမှာပါ။ အဲဒီခေတ်က အီရန် အီရတ် စစ်ပွဲခေတ်မို့ ဒီလောက် အခြေအနေ ဆိုးတယ် မထင်ပါနဲ့။ ခု အီရန်ရဲ့ အစွန်းရောက် ဘာသာရေး အခြေအနေက ပိုတောင် ဆိုးနေပါတယ်တဲ့။
ဦးကျောက်ခဲ says: ကျေးဇူးတင်စရာမလိုပါဘူး မွပြုံးရယ်…
ဒီစာအုပ်ကို ဖြန့်ကျက်တွေးရင် တွေးနိုင်သလောက်ရတယ်…
Shwe Ei says: လူလည်းတ​ထွေ​ရေလည်းတခြားကိုဖတ်​မိ​တော့​ကြောက်​တယ်​
သံစဉ်​သံလှိုင်းစိတ်​ခိုင်း​စေရာကို ဖတ်​မိ​တော့ လွမ်းသလိုလို
၁၉၈၄ Two solitude ဘူဒင်​ဘရွတ်​ခ်​ တို့ကျ​တော့ စွဲ​နေ​အောင်​မှတ်​မိနိုင်​တာမျိုးလို့မထင်​ . . ဖတ်​​နေတုန်း​တော့ သ​ဘောကျတယ်​ :-)
အိမ်​ယာမဲ့ ဆိုတဲ့ ဘ၀တစ်​​ကွေ့ကို သတိမရချင်​တဲ့
အန်​ကယ်​​ကျောက်​စ်​ကို​တော့. .ဘာလို့လဲလို့ မ​မေး​တော့ဘူး. .
သတိမရချင်​​တော့ရင်​ ​မေ့လိုက်​နိုင်​တာသာ အ​ကောင်းဆုံး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2898
ဦးကျောက်ခဲ says: ရွှေအိရေ… တခြားရှူထောင့်ကပြောရရင်…
ဒီစာအုပ်ကို Middle East မှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ …
ရွှေပြည်ကြီးက နှမတွေကို အရမ်းဖတ်စေချင်တာပဲ…
အိမ်ယာမဲ့ ၃-နှစ်တာဘဝက ဇာတ်နာလွန်းလို့ မရေးချင်တာ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12177
Alinsett @ Maung Thura says: ဖတ်ချင်တယ်… ဖတ်ဖြစ်အောင်…ဖတ်အုန်းမယ်…
ဦးကျောက်ခဲ says: ဖတ်ကြည့် ဒညင်းဝက် … သည်းထိတ်ရင်ဖို…
ပြီးရင် ရှူထောင့်စုံက စဉ်းစားလို့ရတဲ့ ရသစုံပေးတယ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7194
Mike says: .ဆရာမ ဝင့်ပြုံးမြင့်ရဲ့ “လူလည်းတထွေ ရေလည်းတခြား” ကို လှည်းတန်း စာအုပ်ဆိုင်က၀ယ်လာပါပြီ
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ဖတ်ပြီးရင် အီရန်သွားနေမှာလားဟင်။
ဦးကြောင်ကြီး says: အိုင်းစစ်ဆိုတဲ့ သတ္တဝှာကို ရီးပဲလို့ ဤနေလျှာမှ ပေါ်တင်ဆဲဒယ်… ငှာကွ။
ဇီဇီခင်ဇော် says: အဲဒီ ကား ကြည့်တော့ ကျနော် အတော် ငယ်သေးသလား??? ကြည့်ဖူးတာပဲမှတ်မိတယ်။
အိမ်က လူကြီးတွေ ကြည့်တာကို ဖြတ်သွားဖြတ်လာ ကြည့်ဖူးလေသလားမသိ။